Mpanamboatra sy mpamatsy solika metalin'i China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd.
Home > Products > Fitaovana metaly
Sehexagonal Head Male Thread Brass Bushing
Ny orinasa WENAP dia mpamatsy vaovao an-tserasera, dia manatontosa amin'ny famokarana latabatra CNC / AUTO, loharano, shafts, vintsy, fikorotanana ary ampahany metaly hafa. Ny fomba famokarana lehibe indrindra dia ny famolavolana sy ny porofo miorina amin'ny sary na samples mpanjifa.
Fiarovan-drakotra vita amin'ny varahina marefo
Ny varahina dia efa nampiasaina ho toy ny vata fampangatsiahana ho an'ny trano sy indostria. Ny fitaovana dia manana toetra maro izay mahatonga azy io ho vahaolana mahomby. Ny fitaovana fanenomana varahina dia tsara indrindra ho an'ny fizarana rano mafana satria afaka manohitra ny hafanana ambony izy ireo. Manana fitarihana tena tsara izy ireo izay mampiroborobo ny famokarana rano mafana ao an-trano.
Kitapo vita amin'ny varahina miaraka amin'ny fanafanana vita amin'ny Nickel
Faly izahay mampiseho ny tenanay amin'ny maha-mpisava lalana ny Brass Electrical Accessories, Inserts, Nuts, Bolts, Ankera, Fasteners, Electrical, Gland Cables, Parties, Parties, Presses, Units, Edelstahl, Products Copper, Metal Casting, Connector Electronic Ny karazan-tsarimihetsika rehetra vita amin'ny biriky dia nivadika na nopotehina araka ny filazan'ny mpanjifa sy ny sary.
Ny vokatra ankapobeny dia ny fantsom-pitaovan'ny fantsom-panafody, ny fantsom-pitaovam-barotra avy amin'ny karbaona, ny fantsom-pitaovam-pandrika, ny fantsom-pifandraisana an-tsokosoko, ny fantsom-pirafetana tsy misy fefy, ny flanges, ny bolongana ary ny fantsika, ny PTFE ary ny kofehy. Ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny fiarovana ny afo, fantson-drano, fananganana fotodrafitrasa ary famolavolana, sns.